Beesha Cadaado oo shaacisay inay Xasan Dahir ku wareejinayaan Dowladda Somalia
Topnews :-Beesha Cadaado oo shaacisay inay Xasan Dahir ku wareejinayaan Dowladda Somalia
28 June 2013 Waagacusub.com-Madaxweyne ku xigeenka Ximin iyo Xeeb Abdi Mohamed Ahmed ayaa Radio Muqdisho u sheegay in Hassan Dahir Aweys diiday inuu Muqdisho tago hasse yeeshee ay maamulkooda ku wareejinayaan Dowladda Federalka Somalia.
Hassan Dahir Aweys oo loo martigeliyay hab maamuus uusan mudneen ayaa wali ku adkeeysanaya in lagu garabsiiyo wax uu ku sheegay Jihaad,wuxuuna beesha Cadaado weydiistay inay taageero Ciidan siiyaan. Madaxweyne ku xigeenka Ximin wuxuu tibaaxay in Mustaqbalka Hassan Dahir ku jiro gacanta Dowladda Somalia,ayna u gudbin doonaan halka Dowladda ku taliso.
"Anaga iyo Hassan Dahir nama wada qaado Cadaado sidaas darteed wuxuu go-aankeenu yahay inaan Dowladda Somalia ku wareejino" ayuu yiri Abdi Mohamed Ahmed.
Saraakiil ay ka mid yihiin Yusuf Indhacadde,Abdulkadir Ali Omar iyo Ugaas Dahir Cagajabeey ayaa kulan xasaasiya la yeeshay Hassan Dahir Aweys oo xasuuq baahsan kula kacay beesha Hawiye hasse yeeshee wada hadaladooda waxay ku dhamaadeen fashil.
Hassan Dahir Aweys wuxuu Koofurta Somalia ku martigeliyay argagixiso uu ka mid yahay Ahmed Godane ,iyadoo ugu dambeyn uu Aweys DOOM ku baxsaday ,si la mida baxsashadii Doomta ee Muuse Suudi Yalaxow iyo Bashiir Raage.
Fadeexada ku dhacday Hassan Dahir waxaa u sababa macangagnimadiisa maxaa yeelay ma jirto dhacdo ka xun in cabsi uu ka qabo Ahmed Godane oo Hargeysa ka yimid darteed ku baxsado DOOM .
Hassan Dahir Aweys waxay naaftiisa siin weyday inuu magangalo beesha uu ka dhashay ee Ceyr Habargidir ama Sacad,waxaana la wada eegayaa waxay kala mutaan isaga iyo beesha Reer Xaaji Suleyman Habargidir.
Su-aashu waxay tahay beesha Reer Xaaji magangalyo ma siin kartaa nin ku jira liistiga madoow ee dunida,madaxiisana la dhigay Malaayiin Dollar?
Beesha Cadaado ma aqbali kartaa inay argagixisada talis Ciidan ka sameeystaan degaanadooda?
Hassan Dahir oo ka dhashay qabiilka ugu badan Somali ee Hawiye gaar ahaan beelweynta Habargidir ,wuxuu mudan yahay in Cadaalada la horgeeyo.inkastoo beesha qaarkood ku doodayaan inaan Cadaalad la horgeyn karin inta Ahmed Madoobe,Hassan Turki iyo Mukhtaar Roobow yihiin dimbilaabayaal beeshooda hiil ka heysta.
Hassan Dahir wuxuu Muqdisho tegay xilligii Shariif Ahmed Madaxtooyada joogay ,wuxuuna naf geliyay Argagixisadii Al-Shabaab ee tabarta darneed sidaas darteed waxay Xeeldheerayaashu qabaan in la geliyo Xabsi guri si uu noloshiisa ugu dhameeysto.